खेलाडी नै कमजोर रहेको माउरिन्होको दावी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
खेलाडी नै कमजोर रहेको माउरिन्होको दावी
एजेन्सी । प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेष्टर युनाईटेडका प्रशिक्षक जोसे माउरिन्होले खेलाडीको क्षमता माथि प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार राति लण्डन क्लब आर्सनलसंग बराबरीमा रोकिएसंगै प्रशिक्षक माउरिन्होले क्लबका खेलाडीको क्षमतामाथि टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘केही चिज छ । जुन चिज मैले उनीहरुबाट पाएको छैन’, माउरिन्हाले भनेका छन् ।
घरेलु मैदानमा म्यान युनाईटेड दुई पटक पछाडी परेको स्थितीलाई उल्ट्याएर बराबरी नतिजा निकाल्न सफल भएको थियो । प्रशिक्षक माउरिन्होले दुवै गोल खेलाडीको व्यक्तिगत गल्तीका कारण सम्भव भएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘हामीले खेल जित्न पर्ने थियो । तर हामीले दुई ठुला गल्ती गर्यौ । हामीले अन्य धेरै गल्ती ग¥यौ, जसले गर्दा उनीहरुलाई आक्रमण गर्न सजिलो बनायौ ।’
‘यो राम्रो संकेत हो । तर केही चिज छ, जुन खेलाडीबाट मैले पाएको छैन । म यो भन्दा बढी केही भन्दिन’, उनले थपे ।